मायाको चलन के थियो: धर्म, कला वा अर्थव्यवस्था | Absolut यात्रा
मायाको चलन कस्तो थियो? यदि तपाईंले दक्षिणी मेक्सिकोको भ्रमण गर्नुभयो र मनपर्‍दो ठाउँहरू हेर्नुभयो भने चिचेन इत्जामा युकाटान प्रायद्वीपवा Comalcalcoहो, तपाईले यो प्रश्न आफैलाई सोध्नु भएको छ। किनभने त्यो पुरानो मेसोमेरिकन सभ्यता यसले अझै हामीमा ठूलो चासो जगाउँछ।
यसको तीन हजार वर्ष भन्दा बढीको इतिहासभरि, माया संस्कृति पुगेको थियो विकासको एक उच्च स्तर। उनले विशाल पिरामिडहरू र अन्य निर्माणहरू निर्माण गर्न सक्षम थिए जुन समयको बिल्कुल सहीसँग सामना गर्दछ; शहर-राज्यको संरचना अन्तर्गत जटिल राजनीतिक प्रणालीहरू मिलाउन; व्यापक क्षेत्रका साथ वाणिज्यिक नेटवर्कहरू स्थापना गर्न र विकासको महत्त्वपूर्ण बौद्धिक स्तर हासिल गर्न, सबै मध्य अमेरिकामा सबै भन्दा उन्नत लेखनको साथ। यदि तपाईं मायाको रीतिथिति के हुन्थ्यो भन्ने पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई पढ्न जारी राख्न हौसला दिन्छौं।
1 म्यानहरूको चलनहरू कसरी थियो उनीहरूको अधिकतम महिमाको अवधिमा
1.2 म्यान समारोहहरू
1.2.1 केनोटको पूजा
1.2.2 बल खेल, जब मायाको चलनहरू कस्तो परेको बारेमा अपरिहार्य थियो
1.2.3 हानल पिक्सन, उनको दिनको मृत्यु
1.2.4 फसलहरूको लागि मूल्यांकनको कार्यहरू
1.2.5 अन्य अनुष्ठानहरू
1.3 राजनीति र सामाजिक संरचना
1.4 सेना र युद्ध
1.5 म्यान शहरहरू र वास्तुकला, म्यान प्रथाको सबै भन्दा राम्रो परिचित
1.6 म्यान कला
1.7 भाषा र लेखन, मायाका चलनहरू के के हुन् भनेर जान्न आवश्यक छ
1.8 खगोल विज्ञान र मायान पात्रो
1.9 अर्थव्यवस्था र व्यापार
म्यानहरूको चलनहरू कसरी थियो उनीहरूको अधिकतम महिमाको अवधिमा
मायाको चलनको नजिक जाने उत्तम तरिका भनेको ध्यान केन्द्रित गर्नु हो स्पेनिश को आगमन को समय। र यो दुई कारणका लागि हो: यो सब भन्दा प्रलेखित चरण हो र त्यो समय हो जब त्यो सभ्यताले उच्च स्तरको विकास हासिल गरेको थियो। हामी यी रीतिथितिहरू समाजको बिभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूको संरचनागत देख्दछौं।
तिनीहरूका सबै मध्य अमेरिकी छिमेकीहरू जस्तै माया पनि थियो बहुदेववादीहरू। तिनीहरूका देवताहरू मध्ये एक थियो इत्जाम्ना, सृष्टिकर्ता भगवान जसले पनि ब्रह्माण्डको मूर्त रूप लिनुभयो र, विशेष गरी सूर्य। तर पनि चार चाक वा आँधीबेहरीका देवताहरू; को पवतुन पृथ्वी र आयोजित बाकाब तिनीहरूले पनि निर्माण संग यो नै गरे।
र very्गको सर्पको देवता पनि एकदम महत्त्वपूर्ण थिए जुन क्षेत्रका आधारमा फरक नामहरू प्राप्त गर्थे (उदाहरणका लागि युकाटानमा यसलाई भनिन्थ्यो) कुकल्कान), र Quetzalcoatlजीवनको ईश्वर हुनुहुन्छ। मयानसको पनि पौराणिक उत्पत्तिको बारेमा आफ्नो पवित्र पुस्तक थियो। यो उसलाई थियो Popol Vuh, पनि भनिन्छ सल्लाह पुस्तक तपाईंको सभ्यताको ज्ञानको बहुमूल्य चीजको लागि।
अर्कोतर्फ, मयानहरूले आफ्ना देवताहरूको बारेमा केही क्रूर अवधारणा राखेका थिए। तिनीहरूले तिनीहरूलाई श्रद्धांजलि दिए मानव बलिदान किनभने तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि कसरी उनीहरूलाई खुवाए र खुशी भए। तर यसका अतिरिक्त हामी भन्न सक्दछौं कि उनीहरूले लामो समय सम्म बाँच्नको लागि मारे। मायनहरू विश्वास गर्छन् कि आफ्ना देवताहरूको लागि जीवन प्रदान गरेर, तिनीहरूले आफ्नै लम्बाइ गरे।
तिनीहरूले मानव बलिदानहरू चढाउने यो एकमात्र कारण थिएन। तिनीहरू पनि बाहिर गरिएको थियो राम्रो फसलको लागि सोध्नुहोस् र सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू ब्रह्माण्डको काम मौसम र मौसम जस्तै।
अन्त्यमा, जब उनीहरूको ओलम्पस केवल देवताहरूको लागि निर्धारण गरिएको थियो भने, मयानहरूको आफ्नै आकाश थियो। को सिबाल्बा यो त्यो स्थान हो, तर दुवै राम्रो र नराम्रो यसमा गए। तिनीहरूको व्यवहारमा निर्भर, तिनीहरू यहाँ हल्का वा कठोर व्यवहार गरे।
धर्मसँग नजिकको सम्बन्ध भनेको म्यानका मानिसहरूले गर्ने समारोहहरू थिए। यो सबै केसहरूमा त्यस्तो थिएन, ती मध्ये केही अपवित्र थिए। तर, जे भए पनि, तिनीहरूको अनुष्ठान कार्यहरूसँग सम्बन्धित सबै कुरा तपाइँको ध्यानाकर्षण गराउँदछ। हामी तपाईंलाई ती मध्येका केहि समारोहहरू देखाउँदैछौं।
यी टोर्कास वा डुबे कार्ट भूभागका क्षेत्रहरू युकाटान प्रायद्वीपमा प्रायः पाइन्छन्, जहाँ रभियारा माया भनिने पर्यटक शहरहरू छन्। तपाईं उनीहरूलाई कसरी भेट्न लाग्नु भएको छ यदि तपाईं यस इलाकामा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि मायानहरूका लागि, शृंखलाहरू थिए पवित्र ठाउँहरू। तिनीहरू भूमिगत हुने ढोका मानिन्थ्यो त्यसैले उनीहरूमा समारोह र बलिहरू चढाउँथे।
बल खेल, जब मायाको चलनहरू कस्तो परेको बारेमा अपरिहार्य थियो
यस शहरको लागि धेरै फरक चरित्र थियो pok to pok वा बल खेल, तिनीहरूको चलनको सबैभन्दा लोकप्रिय समारोह मध्ये एक। आज पनि तपाइँ पुरातात्विक साइटहरू क्षेत्रहरूमा देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ यो अभ्यास भएको थियो। तर यो मायाको लागि ठूलो महत्वको थियो। उनीहरूको पार्टीहरूमार्फत उनीहरूले शहरहरू बीचका विवादहरू सुल्झाइयो अर्थात् त्यो युद्धको विकल्प थियो।
मोन्टे अल्बानमा बल खेल मैदान
जे होस्, ती झटका हराउनेहरू सामान्यतया euthanized थिए। तसर्थ, यो पनि एक प्रमुख थियो अनुष्ठान घटक। यस खेलमा के समावेश थियो भनेर जान्नको लागि तपाईलाई रुचि छ, हामी तपाईंलाई यो भन्दछौं कि यो भूमिलाई नछोई चिनाईको जाल माथि बल पार गर्नु हो। र तिनीहरूले केवल उहाँलाई काँध, कुहिनो, वा हिप्सले हिट गर्न सक्दछन्।
हानल पिक्सन, उनको दिनको मृत्यु
आजको अवस्थामा जस्तो, म्यानहरू पनि मरेका दिनहरू थिए। त्यो चाड थियो हानल पिक्सन र धूप, संगीत, भोजन, र अन्य समारोहहरूको साथ प्रियजनहरूलाई सम्झनुभयो।
फसलहरूको लागि मूल्यांकनको कार्यहरू
कटनीको लागि कृतज्ञ हुनुहोस् एउटा कार्य छ जुन विश्वको सबै संस्कृति, विगत र वर्तमानमा छ। जमिनको उर्वरता सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि म्यानका विभिन्न समारोहहरू थिए।
संग पा पुल तिनीहरूले आकाशलाई वर्षासँग अनुरोध गरे र Sac Sac तिनीहरूले मकैको विकासको लागि आग्रह गरे। एकचोटि जब पृथ्वीको फलहरू स .्कलन गरियो, तिनीहरूले नृत्यका साथ उनीहरूलाई धन्यवाद दिए नान पच। यो अन्तिम समारोहको लागि, तिनीहरूले कॉर्नकबबाट पुतलीहरू बनाए, वेदीहरूमा राखे र पिउँदा प्रार्थना गरे। पिनोल, मकैको साथ बनेको।
अन्तमा, xukulen यो स्वास्थ्य र समृद्धिको लागि उहाँलाई सोध्न सृष्टिकर्ता ईत्जम्ना पुग्ने समारोह थियो, जबकि Hetzmek यो सानालाई एक प्रकारको बप्तिस्मा समारोह थियो।
राजनीति र सामाजिक संरचना
म्यानहरू तिनीहरूको सरकारको रूपमा थिए राजतन्त्र, यद्यपि स्पेन, इ England्ल्यान्ड वा मा उदाहरणका लागि विद्यमान भन्दा धेरै फरक छ फ्रान्स ती समयमा यद्यपि त्यहाँ केहि समानताहरू थिए। तिनीहरूका राजाहरूलाई ईश्वरका छोराहरू मानिन्थ्यो, यसैले, उहाँको शक्ति ईश्वरत्वबाट आयो। एकै साथ उनीहरूले आफ्नो शहर-राज्य वा इलाकाको सरकारको प्रयोग गरे र यसको रूपमा अभिनय पनि गरे पुजारीहरू.
महान जगुआरको मन्दिर
समाजको सन्दर्भमा, राजाबाट बाहेक, शासक वा उच्च वर्ग गठन गरिएको थियो shamanic चरित्रको पुजारीहरू। म्यानको संसारमा धर्म एकदम महत्त्वपूर्ण थियो र त्यसैले शमनमा ठूलो शक्ति थियो। उनीहरूले राजाको निर्णयमा पनि भाग लिए। अन्त्यमा, ती मध्ये धनीहरू मध्ये तेस्रो खेलाडी थिए कुलीन, जसको शीर्षक वंशानुगत थियो र जसले राजालाई सल्लाह पनि दिन्थे।
अर्को तर्फ, त्यहाँ तल्लो वर्ग थियो जुन कामदार र नोकरहरू सब भन्दा कम लिंकको छेउमा दासहरु। पछिल्लालाई सबै अधिकारको अभाव थियो र ती किनेका कुलीनहरूका सम्पत्ति थिए। अन्तमा मायन सभ्यताको विकासको साथ ए मध्य वर्ग, निजामती कर्मचारी, व्यापारी, कारीगर र मध्य-स्तरीय सैन्य कर्मीहरू मिलेर बनेको थियो।
सेना र युद्ध
निश्चित रूपमा यो पूर्व कोलम्बियाली जनताको मानसिकतामा युद्धको ठूलो महत्त्व थियो। तिनीहरू तिनीहरू माझ वा नजिकका क्षेत्रहरूमा बारम्बार थिए र म्यान सेना राम्रो तयारी र व्यवहार गरिएको थियो विशाल अनुशासन। त्यहाँ थियो भाडाहरूतर सबै स्वस्थ वयस्क पुरुषहरूले युद्धहरूमा भाग लिनु आवश्यक थियो, र यो पनि देखिन्छ कि महिलाले पनि यी द्वन्द्वमा भूमिका खेलेको थियो।
अर्कोतर्फ, यी म्यान योद्धाहरू हतियारको रूपमा प्रयोग गरियो धनुस र वाण। तर, मुख्यतया तिनीहरूले प्रयोग गरे atlatl, एक डार्ट थ्रोर, र पहिले नै स्पेनिश समयमा, एक लामो तरवार वा ग्रेटसवर्ड। थप रूपमा, तिनीहरूले तिनीहरूका शरीरहरू पंक्तिबद्ध गरे कवच प्याडेड कटन को बनेको नुन पानी संग कडा।
म्यान शहरहरू र वास्तुकला, म्यान प्रथाको सबै भन्दा राम्रो परिचित
यो पूर्व कोलम्बिया शहरका शहरहरू योजनाबद्ध थिएनन्। त्यसो भए अनियमित विस्तार। यद्यपि प्राय: ती सबैको केन्द्र औपचारिक र प्रशासनिक भवनहरू मिलेर बनेको छ र यस वरिपरिका धेरै आवासीय क्षेत्रहरू जुन समयसँगै थपियो।
Mucho अधिक जटिल म्यान आर्किटेक्चर थियोतर, यस सभ्यतालाई निर्माणको हिसाबले पुरातात्विक क्षेत्रको सब भन्दा विकसित विकसित क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ। उनीहरूसँग विशेष कामदारहरू पनि थिए।
तिनीहरूले बल खेलका लागि स्क्वायरहरू, आँगनहरू, अदालतहरू बनाए sacbeob वा ड्राइवेवे। तर सबै भन्दा माथि दरबारहरू, मन्दिरहरू, पिरामिडहरू र वेधशालाहरू। यी निर्माणहरू मध्ये धेरै, यसको अतिरिक्त, थियो चित्रहरु, मूर्तिकलाहरु वा stucco राहत संग सजाइएको.
सायद यसको सबैभन्दा सफल भवनहरू मध्ये एक हो ट्रायसिक पिरामिड। यो एक मुख्य भवन हो जुन दुई पक्षले यसको छेउमा र भित्र पछाडि हेरेको छ, सबै समान आधारभूत सतहमा बनाइएको। तिनीहरू विशाल आयामहरू बनाउन आएका थिए र विश्वास गरिन्छ कि यो फारमसँग सम्बन्धित थियो पौराणिक कथा त्यो शहर को।
म्यान कलाको मुख्य उद्देश्य हुन्छ रौतहटयद्यपि यसले अन्य शीर्षकहरू पनि समेट्यो। यो ढु stone्गा वा काठको मूर्तिकला, चित्र, बहुमूल्य ढु stones्गा र सिरेमिकबाट बनेको छ। र्गका लागि उनीहरूसँग विशेष प्रजाति थियो हरियो र निलो जसको लागि तिनीहरूले ती टोनहरूको ज्याड धेरै प्रयोग गर्थे।
अर्कोतर्फ, तिनीहरूका शहरहरूमा ढु stone्गामा स्टिला। तर सबै भन्दा माथि, facades संग सजाइएको स्ट्रक्को चम्किलो रंगमा रंगियो। वास्तवमा उनीहरूसँग ठूलो थियो भित्ति चित्र। तिनीहरूको मिट्टीको चीजहरूको लागि तिनीहरू उन्नत फायरिंग प्रविधिहरू जान्दछन् तिनीहरूसँग कुमालेको पाels्ग्रा थिएन। यस कारणका लागि, राउन्ड टुक्राहरू जस्तै चश्माहरू अन्य प्रविधिहरू जस्तै रोल वार्पिंगको साथ निर्माण गरिएको थियो।
भाषा र लेखन, मायाका चलनहरू के के हुन् भनेर जान्न आवश्यक छ
यस सभ्यताको प्रत्येक क्षेत्रको आफ्नै भाषा थियो। जे होस्, तिनीहरू सबै एक आम भाषा भनिन्छ बाट आएका थिए प्रोटोमाया जो ग्वाटेमालाको उच्च पहाडमा जन्मेका हुन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै गरी, क्लासिक अवधि का सबै संरक्षित ग्रंथहरू (ईसापूर्व तेस्रो शताब्दी ई.पू.) तथाकथितमा लेखिएका थिए जस्तो देखिन्छ। चोल्टी वा क्लासिक म्यान भाषा।
निश्चित रूपमा यस शहरको लेखन प्रणाली उनीहरूको चलनहरू जान्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र यो दुई कारणका लागि: यो एक उच्च स्तरमा पुगेको थियो परिष्कार र सबै भन्दा माथि, हामी तिनीहरूलाई जान्दछौं कि उनीहरूले हामीलाई छोडेका शिलालेखहरू र पाठहरूका लागि धन्यवाद।
जबकि अन्वेषकहरू जसले यसलाई अस्वीकार गर्छन्, अरूले यस लेखलाई उच्च विकासको रूपमा औंल्याउँछन्। पहिलो नमूना ईसापूर्व तेस्रो शताब्दी ई.पू. तर पहिले, त्यहाँ पहिले नै अन्य मेसोमेरिकन लेखन प्रणालीहरू थिए जापोटेक.
यो एक प्रकारको हो glyphic लेखन, जुन शैलीमा हाइरोग्लिफिक्समा आधारित छ, उदाहरणका लागि, प्राचीन मिश्रीको। अलि गहिरो हुँदै जान्छौं, हामी तपाईंलाई बताउँदछौं यसले के प्रयोग गर्दछ लगोग्रामहरू वा शब्दको प्रतिनिधित्वहरू सँगसँगै सिलेबिक संकेतहरू। र यो अब लगभग पूर्ण रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
चार कोलम्बियाली म्यान पुस्तकहरू संरक्षित छन्। को म्याड्रिड कोडेक्स डिभाइनरी प्रकारको हो र मा आधारित छ tzolkin वा मेसोमेरिकन जनताको लागि दिनहरूको पवित्र चक्र। को ड्रेस्डेन कोडेक्स यसले खगोल र ज्योतिष तालिकाहरू समावेश गर्दछ, साथै नयाँ वर्षसँग सम्बन्धित समारोहहरूको विवरण समावेश गर्दछ। आफ्नो पक्ष को लागी, पेरिस कोडेक्स यो म्यान पुजारीहरूको लागि एक प्रकारको म्यानुअल मानिन्छ। अन्तमा, कोडेक्स Grolier, जसको प्रामाणिकता हाल सम्म विवाद गरिएको थियो, हालसालै सत्यको रूपमा पुष्टि गरिएको छ र यसले देवीदेवताहरूको छवि समावेश गर्दछ।
खगोल विज्ञान र मायान पात्रो
खगोल सम्बन्धी ज्ञान र म्यान क्यालेन्डरको मितिहरूको बारेमा यति धेरै अनुमान गरिएको छ कि ती सबैको बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छ। यो सत्य हो कि यो पूर्व कोलम्बियाई शहर आकाशीय पिण्डहरू ध्यानपूर्वक अध्ययन गरे.
तर यसको उद्देश्य ब्रह्माण्डको ज्ञान थिएन, तर एउटा थियो ज्योतिषीय उद्देश्य, Divintory। एक जिज्ञासाको रूपमा, हामी तपाईंलाई बताउछौं कि उनीहरूले सूर्य र चन्द्रमाको ग्रहणलाई विशेष गरी दुर्भाग्यको प्राथमिकता ठाने।
क्यालेन्डर को लागि, Mayans हासिल सौर वर्ष गणना गर्नुहोस् उसको समयका युरोपियनहरू भन्दा पनि राम्रो। तिनीहरूले आफ्नो समयलाई दिनहरूमा विभाजन गरे वा घृणा, स्कोर वा विनई र-360०-दिन बर्ष वा Tun। तर समान रूपमा, तिनीहरू तीन इन्टरलेस्टेड समय चक्रमा आधारित थिए: माथि उल्लिखित tzolkin, २260० दिन; को हाब 365 XNUMX को र कल पात्रो पा .्ग्रा, 52 वर्षहरूको।
म्यान भित्ति चित्र
अर्थव्यवस्था र व्यापार
अन्तमा, हामी तपाईंलाई म्यान अर्थव्यवस्थाको बारेमा बताउनेछौं। तिनीहरूको कृषिको सम्बन्धमा, यस्तो लाग्छ कि उनीहरूलाई थाँहा थियो उन्नत प्रविधि। तिनीहरूले यसलाई अभ्यास गरे टेरेसहरू र अन्य उठाइएको सतहहरू उनीहरूले पानी हाले च्यानलहरु। उनीहरूले प्राप्त गरेको कृषि उत्पादनहरूमा मकै, कासावा, फसल बीन, स्क्वाश, सूर्यमुखी वा कपास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थिए। तर काका, विशेष गरी यसको शासक वर्गहरूद्वारा, यति धेरै कि यो कहिलेकाँही मुद्राको रूपमा प्रयोग गरियो।
अर्कोतर्फ, माया भएको देखिन्छ ठूला व्यापारीहरू। ठूला शहरहरू मनाइयो बजारहरू र तिनीहरू महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्रहरू भए। सामानहरू यसको सडकहरूमा वा नदीहरू मार्फत डु rivers्गा द्वारा जनावरहरू ढुवानी गरियो र त्यहाँ पुग्यो सम्पूर्ण मेसोमेरिकन क्षेत्र। सब भन्दा लोकप्रिय वस्तुहरू कपडा, गहना वा सिरेमिकहरू, तर खाद्य पदार्थहरू पनि थिए।
अन्तमा, हामी तपाईंलाई देखाइएको छ मायाको चलन कसरी थियो, सम्पूर्ण अमेरिकी महादेशमा सब भन्दा उन्नत पूर्व कोलम्बियाली जनता मध्ये एक। तिनीहरूले खगोल विज्ञान र वास्तुकलामा ज्यादै रुचि राख्ने समाज, तर वाणिज्य र बहुमूल्य चीजहरूको पनि गठन गरे।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » मायाको चलन कसरी थियो